« Hiragasy makotrokotroka » : tropy mpihiragasy 22 hifampitana | NewsMada
« Hiragasy makotrokotroka » : tropy mpihiragasy 22 hifampitana
Par Taratra sur 13/07/2016
Hotanterahina ny 17 jolay hatramin’ny 16 oktobra izao ny andiany fahafito amin’ny « Hiragasy makotrokotroka ». Mivoatra isan-taona ny hetsika. Nitombo isa ny tropy mpandray anjara, izay mahatratra 22 amin’ity taona ity.
Tsy hangina akory ny tanànan’Antananarivo, amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao ary misy ny fialamboly sady fahalalana ho an’ny ankizy sy ny tanora. Tsy inona izany fa ny « Hiragasy makotrokotroka », iarahan’ny Ortana* sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra mikarakara, toy ny isan-taona.
Hanomboka amin’ny alahady 17 jolay izao ity andiany fahafito ity ary haharitra telo volana be izao, izany hoe tsy hifarana raha tsy ny 16 oktobra. Hotontosaina etsy anoloan’ny lapan’ny tanàna etsy Analakely ny lanonam-panokafana, raha toa ka eny amin’ny kianjan’Andohalo hatrany no hifandona ireo tarika, isaky ny alahady tolakandro.
Nahatratra 20 ny tarika nandray anjara tamin’ny taon-dasa ary tsy ho latsa-danja amin’izany ny amin’ity taona ity, miisa 22, araka ny nambaran’ny mpikarakara. Analiny kosa ny olona kendrena hijery ireo adin-kiragasy ka anisan’izany ireo mpizahatany mandalo eto Analamanga. Tanjon’ny hetsika ny hampahafantatra ny tanora ankehitriny ny hiragasy, zavakanto mampiavaka ny eto afovoan-tany, sy ny hisarika ny vahiny ho tonga eto amintsika.
Fifaninanana ny fandraisana anjara amin’ny « Hiragasy makotrokotroka » ho an’ireo tarika mpihiragasy. Toy ny isan-taona, misy ny loka goavana hatolotra ny mendrika indrindra, toy ny iray tapitrisa ariary norombahin-dry Ramaroson, tamin’ny taon-dasa. Marihina fa manan-danja ny tehaky ny mpijery amin’ny fitsarana ireo tarika. Maimaimpoana hatrany kosa ny fijerena hiragasy.
*Ortana : Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga.